Abantu abayi-5 ABAPHEZULU eDijon : Igumbi Elinemigangatho/iCathedral view - I-Airbnb
Abantu abayi-5 ABAPHEZULU eDijon : Igumbi Elinemigangatho/iCathedral view
Xa iyi-206 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Ukuzingenela kweeyure eziyi-24
UKURHOXA SIMAHLA kude kube ziintsuku eziyi-5 ngaphambi kokufika
kwemizuzu eyi-2 ukuya kweyi-5 ukuya KWISIKHULULO SETREYINI, KWISIKWERE se-Darreon, I-TRAM, i-Palais DES Ducs, i-VILLE-HngerORIQUES IZIKO
Indawo esembindini esemagqabini yale flethi okanye indlu ekwicomplex entle. Kwindawo entle iSaint-Bénigne Cathedral, eli gumbi liyi-40 lilungisiwe laza laxhotyiswa ngendlela esemagqabini. Umsebenzi wamaplanga, ilitye elivelileyo, ukwakheka okuqaqambileyo... I-Dijon iyaziveza kwiintsuku zayo ezigqwesileyo!
I-suite Indivio yindawo yethu yokuhlala yesibini kwaye kuyavuyisa ukuba sikuvulele iminyango yayo ixesha elininzi enyakeni.
I-pied-à-terre egqibeleleyo yokubuka intliziyo yembali yaseDijon, le flethi iqaqambileyo ikunika umbono okhethekileyo weCathedral yaseSaint-Bénigne de Dijon. Ikumgangatho wokuqala wesakhiwo esiqhelekileyo saseDijonese, ilungiswe kakuhle, yahonjiswa yaza yaxhotyiswa ukuze uthi zava. Iflethi ine-WiFi.
Igumbi eliphambili leflethi lakhiwe ngezinto ezimbini: inxalenye evulekileyo yekhitshi (isitovu sombane, ioveni kunye ne-microwave, ifriji, i-deep freezer, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wekofu weNespresso, iketile, njl.) kunye netafile nezitulo, kunye neemveliso ezisisiseko ezigcwalisa izixhobo (iikomityi zekofu, iibhegi zeti, iswekile, ityuwa, i-oyile, i-jam...) kunye nendawo yokuhlala enesofa enokutshintshwa ibe yibhedi, i-Smart TV apho unokufikelela kwiziteshi zikazwelonke kunye neqonga lokusasaza le-Netflix.
Ukuvula okubanzi okwahlukaniswe ngeminyango esilayidayo kukwenza ukwazi ukusebenzisa igumbi lokulala elivulekileyo kunye nezinto zokondlula ibhedi ezisemgangathweni eziyi-160x200 cm (amashiti anikezelweyo). Igumbi lokulala livuleka kwigumbi lokuhlambela elitofotofo kwaye linefenitshala yegumbi lokunxiba, isitya sesinki esinesipili neshawa enkulu. Iitawuli ziyafumaneka kunye ne-shower gel. Indlu yangasese ayinalo igumbi lokuhlambela ibe inomatshini wokuhlamba impahla negumbi layo elincinci lokuhlamba iimpahla.
I-wifi ekhawulezayo – i-206 Mbps
4.96 · Izimvo eziyi-233
Isithili saseSaint-Bénigne Cathedral kunye neDarreon Square yindawo ekufuneka ibonwe nakanjani kwisixeko saseDijonese kunye nobomi babakhenkethi kangangamashumi eminyaka. Idibanisa izakhiwo ezininzi ze-Haussliday-style, i-Guillaume Gate edumileyo e-Dijon, ekuthiwa yi-Arc de Triomphe ese-Paris, izakhiwo ezininzi zokupheka, i-dorm yase-Greece (ngoku yimyuziyam yezinto zakudala) ehambelana neentaba ze-Cathedral enkulu yase-Saint-Bénigne. Kwakhona kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya nakweyiphi na iivenkile, iDukes yaseBurgundy kunye neMyuziyam yayo yobuGcisa elungisiweyo.
Sithanda isixeko saseDijon, siza kukunika yonke inkcazelo oyidingayo ukuze siqinisekise ukuba uhlala kwikomkhulu laseDukes of Burgundy. Siza kukuvuyela ukuphendula imibuzo yakho nge-imeyile okanye ngomyalezo kwaye siza kutshintsha amacebiso ethu ngokweemfuno zakho. Kwindawo yakho uza kufumana iincwadana ezininzi zabakhenkethi kunye nencwadi eneedilesi zethu eziphambili zaseDijonese. Sithetha isiFrentshi nesiNgesi.
Ukufikelela kwi-La Suite Indivio kuyazimela, zonke iingcaciso ziza kunikezelwa emva kokubhukisha kwakho.
Sithanda isixeko saseDijon, siza kukunika yonke inkcazelo oyidingayo ukuze siqinisekise ukuba uhlala kwikomkhulu laseDukes of Burgundy. Siza kukuvuyela ukuphendula imibuzo yakho ng…
Inombolo yomthetho: 853391340
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dijon